Chokwadi F22 Plus 3G / WIFI (Android isina kuvhurwa) - Network Radios
musha / Radios / Network maRadio / Chokwadi F22 Plus 3G / WIFI (Android yakavhurwa)
Iyo Sure F22 + inetiweki redhiyo inoenderana neiyo android smartphone ine yakatsaurwa PTT bhatani. Inoshanda ne2G, 3G uye WiFi. Ingoisa Zello, kana Team Taura 3 kubva kuGoogle Play chitoro, uye une Global Coverage Walkie-Talkie Radio.
Isu tese tinoda kufamba, handiti? Ko kana isu tichigona kuzviita, uye tichiramba tichitaurirana nharaunda yedu yeham? Tichishandisa iyo IRN (iyo RF nzira yekuenda kune dzinoverengeka ham mambure neDMR, Echolink, Allstar uye analogue vanodzokorora) tinogona kuzviita! Uye, kana takatakura PTT-inogoneswa Dual-SIM smartphone senge Chokwadi F22 Plus, inotonyanya kunakidza: Zvese mashandiro efoni yeApple, pamwe neiyo redhiyo-senge chimiro cheichi chishandiso!
Kunyangwe paGPRS / Edge inononoka kubatana iwe unogara uchinzwikwa ne5 + 9!
Bhatiri rinogara kusvika kumazuva matatu uye iwe unozoshamiswa nekristaro yakajeka kurira kwemutauri wayo une ruzha kwazvo.
1) Yakawedzerwa GSM / WCDMA Antenna
2) 5.0MP Yakareba Kamera
3) Yakavakirwa-Mu GPS / BDS Navigation
4) Tsigira Zello PTT / Chikwata Taura 3 / IRN (International Radio Network)
5) 3500 mAh Yakakwira chinzvimbo Bhatiri
Model No. F22 + Uyezve
miganhu 124.5 * 56.5 * 26mm
Net Weight 195g (sanganisira bhatiri)
bhendi 2G: GSM850/900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA2100MHz
MuUS zvinongoshanda chete neAT&T kana WiFi.
Sim Card Dual SIM kadhi mbiri yakatarisa (imwe iri micro SIM)
Service Provide chakazarurwa
Nyaya Yenyaya chikweshe
CPU MTK6572W, Cortex A7 hunyambiri moyo, 1.2GHz; GPU: Mali-mazana mana
ROM 4GB ROM, inotsigira TF kadhi inosvika 32GB max
Screen 2.4 padiki QVGA capacitive inobata skrini, 320 * 240px
Data kudhara USB / Bluetooth
kamera Makamera maviri, 2.0MP kumberi kamera, 5.0MP kumashure kamera
mashoko SMS / MMS
chiyamuro Manyorero / Keypad
GPS Ehe, zvakare tsigira A-GPS / BDS
MAKARALI USB Hongu, V4.0
Kushanda nguva Kusvikira maawa 16
Nguva yakamira Kusvikira maawa 96
Zvimwe Zvikamu Email, Wallpaper, Karenda, Calculator, Clock, Play Store, Tethering & inotakurika hotspot, nezvimwe
Languages Chirungu, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Cestina, Dansk, Deutsch, Espanol, Filipino, French, Hrvatski, Italiano,
zvishongedzo 1 x 3500mAh bhatiri
1 x Yekusingaperi GSM Antenna
Chinhu ichi chinotumirwa kubva
2 anodzokorora nokuti Chokwadi F22 Plus 3G / WIFI (Android yakavhurwa)
Ini ndinoshandisa iyo Sure F22 + pachangu uye ndinongoida!
Vhidhiyo yakanaka paF22 inogona kuwanikwa pano: https://www.youtube.com/watch?v=AHJrFY3vosA
Inrico T298s 3G / Wifi (Android kukiyiwa)
Inrico S300 4G / Wifi (Android yakavhurwa)
$349.00 Select mikana
$399.00 Select mikana